The Conjuring3ရဲ့ ဒါရိုက်တာ အဖြစ် မြင်တွေ့ရတော့မှာ မဟုတ်တဲ့ James Wan
4 Oct 2018 . 3:02 PM
နာမည်ကျော် သည်းထိတ်ရင်ဖို ဒါရိုက်တာ James Wan ဟာ The Conjuring ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရဲ့ တတိယမြောက်ဇာတ်ကား ‘The Conjuring 3’ ကို ဒါရိုက်တာ အဖြစ်ရိုက်ကူးမှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ သူ့အစား ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ပြသတော့မယ့် Supernatural Horror ဇာတ်ကား ‘The Curse of La Llorona’ ရဲ့ ဖန်တီးရှင် ဒါရိုက်တာ Michael Chaves ကို ရိုက်ကူးစေမယ်လို့ သိရပြီး James Wan ကတော့ Producer နဲ့ ဒီဇာတ်ကားတွေရဲ့ ‘Godfather’ ကြီးအနေနဲ့ပဲ နောက်ကွယ်က ပံ့ပိုးပေးတော့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
‘The Curse of La Llorona’ ရဲ့ Producer ဟာလည်း James Wan ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် James Wan က “The Curse of La Llorona အတွက် Chaves နဲ့ လက်တွဲအလုပ်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Chaves ဟာ ဇာတ်လမ်းအတွက် ခံစားချက်ကောင်းကောင်းကို သယ်ဆောင်လာပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ လူ့စိတ်ခံစားချက်တွေကို နားလည်မှုဟာ အသစ်ထွက်ရှိမယ့် Conjuring ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးဖို့ သင့်တော်စေတာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်က ကြားသိရတဲ့ သတင်းတွေအရ ‘The Conjuring 3’ ဇာတ်ကားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ရိုက်ကူးပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ပြသဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ‘The Conjuring 2’ ရဲ့ Screenwriter David Leslie Johnson ကိုပဲ ‘The Conjuring 3’ ကို ရေးသားဖို့ ပြန်ခေါ်ထားပါတယ်။
Patrick Wilson နဲ့ James Wan
ဒါတင်မဟုတ်ဘဲ Ed နဲ့ Lorraine Warren အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Patrick Wilson နဲ့ Vera Farminga လည်း ပြန်လည်ပါဝင်လာဖို့ ရှိပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းအသေးစိတ်ကတော့ ပြင်ဆင်နေတုန်းရှိပြီး ‘The Conjuring’ ဇာတ်ကားတွေမှာ တွေ့နေကြဖြစ်တဲ့ ‘ အိမ်တစ်အိမ်မှာ မကောင်းဆိုးဝါး Devil ကောင်က ဝင်ရောက်ပူးကပ်တဲ့ အစဉ်အလာ’ ကနေ ချိုးဖျက်သွားမယ်ဆိုတော့ ဘယ်လို ခင်းကျင်းပြသမလဲဆိုတာ အတော်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေပါတယ်။
‘The Conjuring 3’ ကို စောင့်မျှော်နေတဲ့ ပရိသတ်အတွက် ဒီသတင်းကောင်းရှိသလိုပဲ ‘Annabelle 3’ ကို စောင့်မျှော်နေတဲ့ ပရိသတ်အတွက်လည်း ဒီနှစ် ဆောင်းဦးမှာ ရိုက်ကူးမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကောင်းရှိနေပါတယ်။ ကဲ! The Conjuring Universe ရဲ့ ဇာတ်ကားအသစ်တွေကတော့ ဘယ်လို ကြမ်းမလဲ၊ ကြောက်ဖို့ ကောင်းမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးစို့။
The Conjuring3ရဲ့ ဒါရိုကျတာ အဖွဈ မွငျတှရေ့တော့မှာ မဟုတျတဲ့ James Wan
နာမညျကြျော သညျးထိတျရငျဖို ဒါရိုကျတာ James Wan ဟာ The Conjuring ဇာတျလမျးတှဲတှရေဲ့ တတိယမွောကျဇာတျကား ‘The Conjuring 3’ ကို ဒါရိုကျတာ အဖွဈရိုကျကူးမှာ မဟုတျတော့ဘူးလို့ သိရပါတယျ။ သူ့အစား ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဧပွီလ ၁၉ ရကျနမှေ့ာ ပွသတော့မယျ့ Supernatural Horror ဇာတျကား ‘The Curse of La Llorona’ ရဲ့ ဖနျတီးရှငျ ဒါရိုကျတာ Michael Chaves ကို ရိုကျကူးစမေယျလို့ သိရပွီး James Wan ကတော့ Producer နဲ့ ဒီဇာတျကားတှရေဲ့ ‘Godfather’ ကွီးအနနေဲ့ပဲ နောကျကှယျက ပံ့ပိုးပေးတော့မယျလို့ ဆိုပါတယျ။
‘The Curse of La Llorona’ ရဲ့ Producer ဟာလညျး James Wan ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ James Wan က “The Curse of La Llorona အတှကျ Chaves နဲ့ လကျတှဲအလုပျလုပျကွညျ့တဲ့အခါမှာ Chaves ဟာ ဇာတျလမျးအတှကျ ခံစားခကျြကောငျးကောငျးကို သယျဆောငျလာပေးနိုငျတဲ့သူဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ လူ့စိတျခံစားခကျြတှကေို နားလညျမှုဟာ အသဈထှကျရှိမယျ့ Conjuring ရုပျရှငျဇာတျကားကို ရိုကျကူးဖို့ သငျ့တျောစတော ဖွဈပါတယျ” လို့ ပွောကွားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အရငျက ကွားသိရတဲ့ သတငျးတှအေရ ‘The Conjuring 3’ ဇာတျကားကို ၂၀၁၉ ခုနှဈမှာ ရိုကျကူးပွီး ၂၀၂၀ ခုနှဈမှာ ပွသဖို့ စီစဉျထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ ‘The Conjuring 2’ ရဲ့ Screenwriter David Leslie Johnson ကိုပဲ ‘The Conjuring 3’ ကို ရေးသားဖို့ ပွနျချေါထားပါတယျ။
Patrick Wilson နဲ့ James Wan
ဒါတငျမဟုတျဘဲ Ed နဲ့ Lorraine Warren အဖွဈ သရုပျဆောငျထားတဲ့ Patrick Wilson နဲ့ Vera Farminga လညျး ပွနျလညျပါဝငျလာဖို့ ရှိပါတယျ။
ဇာတျလမျးဇာတျညှနျးအသေးစိတျကတော့ ပွငျဆငျနတေုနျးရှိပွီး ‘The Conjuring’ ဇာတျကားတှမှော တှနေ့ကွေဖွဈတဲ့ ‘ အိမျတဈအိမျမှာ မကောငျးဆိုးဝါး Devil ကောငျက ဝငျရောကျပူးကပျတဲ့ အစဉျအလာ’ ကနေ ခြိုးဖကျြသှားမယျဆိုတော့ ဘယျလို ခငျးကငျြးပွသမလဲဆိုတာ အတျောကို စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးနပေါတယျ။
‘The Conjuring 3’ ကို စောငျ့မြှျောနတေဲ့ ပရိသတျအတှကျ ဒီသတငျးကောငျးရှိသလိုပဲ ‘Annabelle 3’ ကို စောငျ့မြှျောနတေဲ့ ပရိသတျအတှကျလညျး ဒီနှဈ ဆောငျးဦးမှာ ရိုကျကူးမယျဆိုတဲ့ သတငျးကောငျးရှိနပေါတယျ။ ကဲ! The Conjuring Universe ရဲ့ ဇာတျကားအသဈတှကေတော့ ဘယျလို ကွမျးမလဲ၊ ကွောကျဖို့ ကောငျးမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့လိုကျကွပါဦးစို့။